Qalalaasaha Tigray: Abiy Axmed, muxuu u dagaal geliyay ciidamadiisa? |
Qalalaasaha Tigray: Abiy Axmed, muxuu u dagaal geliyay ciidamadiisa?
Muddo ka badan saddex toddobaad, Abiy Axmed waxay ciidamadiisa howlgal ka wadaan gobolka Tigray si meesha looga saaro maamulka TPLF ee ka taliyo halkaas kaddib markii lagu eedeeyay inay weerar ku qaadeen saldhigga militeriga ee ku yaalla gobolkaas.
TPLF waxay maamulka la wareegeen sanadkii 1991-dii balse waxay awoodda lumiyeen markii uu xilka qabtay sanadkii 2018-kii Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.
Mr Abiy markii uu awoodda qabtay wuxuu helay taageero badan, wuxuu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo meesha loga saarayo musuqmaasuqa iyo tacaddiyada ka dhici jiray Itoobiya markii ay talada hayeen TPLF in ka badan 25 sano.
Booliska waxay digniin u direen nin kamid ahaa dadkii Abiy usoo xulay abaal marinta nabadda
Wuxuu la rumeysanaa in muwaadiniinta uu waajib ka saaran yahay inay u durbaan tumaan howlgalka militeri ee uu Abiy ku dhawaaqay ee ka dhanka ah TPLF, saraakiisha Federaalka waxay dhaleeceen kala kulmeen howlgalka militeri xitaa waxay bartilmaameedsadeen aqoonyahan u dhashay dalkaas oo fadhigiisu yahay UK kaas oo kamid ahaa dadkii Abiy usoo xulay in uu ku guuleysto abaal marinta nabadda.
Awol Allo oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda ku taalla UK ee Keele ayaa sheegay in warbaahinta dowladda Itoobiya uu ka maqlay in booliska ay ku eedeeyeen in “uu warbaahin caalami ah uu adeegsanayo sidii dalka ay ku burburin lahaayeen”- waxay arrintani ka dambeysay wareysi uu siiyay warbaahinada sida BBC iyo Al Jazeera.
“Xilligan ma ogo in la ii jaray warqad laiigu soo xirayo iyo in kale balse haddii aan dib ugu laabto Itoobiya waxaan wajahi karaa halis” ayuu Awol oo wareysi siinayay BBC-da.
“Wax farqi ah uma dhexeeyo maamulka Abiy iyo maamuladii hore ee ka jiray Itoobiya maadama walaac laga muujinayo sida loola dhaqmayo mucaaradka iyo dadka dhaleeceyo dowladda, waa xaalad ka jirta Itoobiya mar haddii nidaamka sharciga laha dhigayo aalad lagu aamusiinayo mucaaradka iyo dadka wax dhaleeceya”
Madaxa Ha’yadda Caafimaadka Adduunka Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa dhawaan lagu eedeeyay in uu taageerayo TPLF.
Wuxuu horraan kamid ahaa dowladdii TPLF, madaxa ciidamada Itoobiya ayaa ku eedeeyay inuu isku dayayo sidii uga caawin lahaa TPLF inay hub ku helaan.
Wuxuu beeniyay eedeymaha loo jeediyay isla markaana ugu baaqay labada dhinac inay ka shaqeeyaan nabadda si loo ilaaliyo badqabka shacabka.
Isaga oo difaacayo dowladda, Menychle Meseret oo ah aqoonyahan ka tirsan jaamacadda Gondar wuxuu sheegay in dadka xiriirka tooska ah iyo midka dadban la leh kooxda TPLF la bartilmaamedsanayo.
“Tan iyo markii Abiy uu noqday Ra’iisul Wasaaraha, waxaa la furay 264 website oo baahiya wararka, waxa hadda socdo gebi ahaanba lama oran karo waa muuqaalka dimuqraadiyadda Itoobiya, dalka wuxuu wajahayay halis, TPLF waxay weerar ku qaaday saldhiggii ciidamada militeriga ee waqooyiga ku yaallay- marka ma jiro dal u dulqaadan arrintaas” ayuu yiri Menychle.
“Waxaa loo bahaan yahay ayaa dowlad dadka ku maamusha dulqaad isla markaana ka shaqeysa nabadda iyo wadahhadallada intii labada djimaca ay isku diyaarin lahaayeen dagaalka” ayuu yiri Awol.
“Abiy wuxuu golaha wasiirada ka saaray TPLF sanadkii 2019-kii, wuxuu dib u dhigay doorashooyinka, TPLF waxay qabsadeen doorasho, waxay ku yraahdeen kuma aqoonsanin in aad Ra’iisul Wasaare tahay, isagana wuxuu ku yri idiin ma aqoonsanno, waa waxa dagaalka horseeday” ayuu tiei Awol.
Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in cudurka Koroona dartii dib loogu dhigay doorashada, dadka dhaleeceeya siyaasadda Abiy waxay ku eedeynayaan in uu wado dhaqdhaqaaq uu ku kororsanayo muddo xileedka.
Dadka dhaleeceyo siyaasadda Abiy waxay sheegayaan in caddaallada Itoobiya aysan xooganeyn.
“Bishii July waxaa xabsiga la djigay 10,000 qof, tirada ayaa intaas ka badan kartaa maadama uu dagaal ka socdo Tigray” ayuu yiri Awol.
Mr Menychle wuxuu intaas ku daray in nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan uu yahay sababta loo aaneynayo colaado badan oo ka dhacay Itoobiya nidaamkaas oo ay dalka ka hirgeliyeen TPLF sanadkii 1991-dii markii ay awoodda qabsadeen.
Dadka dhaleeceeya siyaasadda Abiy waxay ku doodayaan in haddii Itoobiya laga saaro nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan uu dalka ku laaban doono xilligii maamuladii Menelik II iyo Haile Selaisse- taas oo bulshooyinka ku qasbi doono inay qaataan dhaqanka Amxaarada waana tan dad badan ay kasoo horjeedaan.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Abiy Axmed
Wuxuu ku dhashay Agaro, Koonfurta Itoobiya, 15 August 1976 – Aabihii waa Muslim, hooyadiisana waa Masiixiyad ka soo jeeda Amxarada
Isagoo da’da tobanaadka ku jiray, 1990-kii, wuxuu ku biiray Jabhaddii la dagaallameysay maamulkii xilligaa.
Wuxuu jaamacadda ka bartay Arrimaha nabadda iyo amniga, wuxuuna ka baxay jaamacad ku taalla Addis Ababa.
Sidoo kale, wuxuu Maamulka iyo Hoggaanka ka soo bartay Jaamacadda Greenwich ee London
Wuxuu si fiican ugu hadlaa luqadaha Afaan Oromoo, Amxaric iyo Tigrinya, iyo sidoo kale English
1995: Wuxuu Qaramada Midoobey uga shaqeeyay arrimaha nabadda ee Rwanda
2007: Wuxuu aasaasay Shirkadda Amniga xogta internet-ka (INSA), wuxuuna ka mid ahaa guddiga maamulka Ethio Telecom iyo Ethiopian TV
2010: Wuxuu galay siyaasadda, wuxuuna xubin caadi ah ka noqday OPDO, wuxuuna Golaha fulinta ee Xisbiga ka mid noqday 2015
2016: Wuxuu muddo kooban ahaa wasiirkii Seyniska iyo tiknolojiyadda
2018: Wuxuu noqday Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya
2019: Wuxuu Isbeheysigii EPRDF ka dhigay hal xisbi oo qaraxan oo loo bixiyay – Xisbiga Barwaaqada
2019: Wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Caalamiga ah ee Nabadda ee Nobel Peace Prize
2020: Wuxuu ku dhawaaqay olole militari oo ka dhan ah TPLF
Abiy Axmed ayaa ku guuleystay billadda Nababadda ee Nobeel-ka, waxayna guddiga sheegeen inuu biladda ku muteystay doorkiisa xalinta khilaafaadka xadka ee kala dhexeeya Ereteriya, iyo kor u qaadista nabada iyo dib u heshiisiinta dalkiisa iyo guud ahaan Bariga Afrika.
Sannadkii 2018-kii Abiy waxaa uu dhaxlay waddan uu hareeyay khilaaf aan la xallin karin oo ka jiray xuduudda dhanka woqooyi, oo ah gobol ay xasillooni darradu si weyn dib ugu dhigtay horumarkiisa dhaqaale.
Dhawr bilood gudahood, wuxuu heshiis nabadeed la saxiixday Eritereya oo ah dal ay Itoobiya la gashay dagaal culus.
Abaal marinta nabadda, seef labo af leh
Alex De Waal oo falanqeeya siyaasadda Itoobiya fadhigiisuna yahay Mareykanka ayaa sheegay in heshiiskii Abiy ee Afwerkii uu hadda u muuqdo ‘Heshiis nabadeed” oo looga guuleysanayo TPLF.
“Eritrea kaalin weyn ayay ku leedahay dagaalka, waxaa jiraa warar sheegayo in cutubyo ka tirsan ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin Tigray” ayuu yiri, inkasta oo labada dowladood ay beeniyeen in ciidamada Eritrea ay ka qeybqaadanayaan dagaalka Tigray.
Awol ma wuxuu ka qoomameynayaa in Abiy uu usoo xushay abaal marinta nabadda?
“Haddii aan ogaan lahaa waxa hadda socda ma sameeyeen tallaabadaas, balse waa seef labo af leh”